Kutanga Kushambadzira Automation yeYako Online Kosi Kuhwina Zvakawanda B2B Kutengesa | Martech Zone
Chishanu, April 10, 2020 Chishanu, April 10, 2020 Michel Habiger
Imwe yedzakanakisa nzira dzekuita mari kuburikidza ne online course kana eCourse. Kuti uwane vanyoreri kubhuku rako retsamba uye kuti uchinje izvo zvinotungamira kukutengesa, unogona kupa mahara, kugara pawebhu webinars kana kurodha mahara ebook, machena mapeji, kana zvimwe zvinokurudzira kuti vatengi veB2B vagadzirire kutenga.
Kutanga Yako Yepamhepo Kosi
Izvozvi zvawave kufunga nezvekushandura hunyanzvi hwako kuita inobatsira online kosi, zvakakunakira iwe! Makosi epamhepo ndeimwe yenzira dzakanakisa dzekuchaisa tarisiro mukutengesa kwepamusoro-margin. Nekushandisa otomatiki ekushambadzira maturusi kuita uku kutengesa, iwe unogona kuwedzera yako shanduko chiyero pasina kuwedzera rako rebasa.
Kufunga zvekudzidzisa - Paunenge uchidzidzisa kirasi, semuenzaniso nezve yekushambadzira michina chishandiso, izano rakanaka kudzidzisa chimwe chinhu chaunofarira kana icho iwe chaunacho hunyanzvi.
Sarudza vateereri vako - Wese munhu arikutsvaga izvo mepu imwe yemugwagwa izvo zvinozovabatsira kuti vakure bhizinesi ravo padanho rinotevera. Kunyangwe iri yega kana bhizinesi, ivo vanoda kutsvaga mhinduro, mabhenefiti, uye mhedzisiro iyo online kosi inogona kuvapa. Mhedzisiro yakavimbiswa nekosi yako yepamhepo inofanirwa kujekeswa zvakajeka kuitira kuti mutengi wako aite yakajeka kutenga sarudzo.
Edza kugadzira zita rekosi yako yepamhepo inotarisana nemhedzisiro yaunoda. Semuenzaniso, kana mhedzisiro ndeyekuti vatengi vako vawedzere shanduko yekutengesa. Chidzidzo chedzidzo senge "Ita yako yekutanga $ 5,000 mukutengesa mune isingasviki vhiki" ichawana zvirinani zvirinani pane "Maitiro Ekuwedzera Kutengesa kweBhizinesi rako," semuenzaniso.
Sarudza Yako Yehuwandu - Unoda here kupa chigadzirwa chako kune chaicho kufarira kana boka revanhu? Mutengi wako akakodzera mumwe arikuita bhizinesi ravo vega, uye vezvemabhizimusi epamhepo kana vamwe vanyanzvi? Ino ndiyo nguva yekuzvibvunza iwe kuti ndeupi mutengi waunoda kukwezva kukosi yako.
Gadzira rondedzero yezvidzidzo nemisoro inopa kukosha kune waunogona kuva mutengi - Dzimwe dzakanakisa online kosi mazano anogona kusanganisira:
Kuchinjira kune rimwe basa
Kutora basa rako padanho rinotevera
Kuwedzera kugadzirwa uye kugona nyore uye munguva shoma
Kudzidza tekinoroji nyowani senge AI uye kugona kuishandisa nekuishandisa nekukurumidza uye zvine mutsindo.
Kuwedzera kuchengetedzeka kwemba kana bhizinesi.
Kuwedzera kutengesa uye kutendeuka kwemitero nemaitiro ekuratidzira ekutengesa kana matemplate.
Pricing - Nemitengo, unogona kuchinja mitemo kuti iite zvaunoda. Unogona kuona kuti mutengo wakakwira weruzivo rwakakosha iwe rwaunopa uye unowana mhedzisiro. Vamwe vatengi vanozopa yakanyanya kunaka maitiro kana iwe ukaisa yakakwira mwero kupfuura kana iwe ukaipa iyo zvishoma. Unogona nguva dzose ona zvichaitwa nemusika.
Kana iwe ukasawana mhinduro yaunoda, unogona kugara uchichinja mutengo wako kana kupa zvipo zvinokwezva vatengi kupinda mune fanera yekutengesa. Semuenzaniso, iwe unogona kupa zvemukati kwemazuva makumi matatu mahara uye wozopa zvimwe zvemukati kana chakakosha kupihwa pamutengo wawakaisa.
Kuchinjisa Chikamu Chete cheKosi Yako Yepamhepo
Kutengesa kosi yepamhepo kunogona kunetsa. Kuvaka kuvimba uye kuratidza kuti nei mutengi angangovimba newe kwakakosha. Paunopa chimwe chinhu chakakosha senge yemahara inodzidzisa webhusaiti, email tsamba, eBook, kana mushumo, izvo zvinosanganisira ruzivo rwekuita iyo mutengi achawana yakakosha kwavari.
Munguva yekutanga kusaina, iwe unogona vanyori vekuongorora kuti uwane zvavanonyanya kufarira uye kugadzirisa ruzivo rwavo rwese panguva uye mushure mekosi. Kune akatiwandei eemail ekutevera-kumusoro maturusi anowanikwa ayo anogona kuita otomatiki mabasa sekuchengeta track yeako email email. Iwe unogona kugadzira inokurumidza kusaina-up fomu inovagonesa kuti vapinde kwete chete yavo email kero asiwo zita ravo uye chaiwo nzvimbo dzekufarira.
Chazvino email yekutevera otomatiki chishandiso, semuenzaniso, inokutendera iwe kuti utumire yakasarudzika email inogamuchirwa maererano nekosi yako yepamhepo uye zvimwe zvinowirirana zvinoenderana nezvechigadzirwa zvinokuchengetedza pamberi nepfungwa dzevangangodaro vatengi. Nekunangisa pamusika wako, iwe unogona zvakare kuvaka kuvimba kusvika padanho iro razvino uye rekare vatengi vachaburitsa iro izwi nezve izvo iwe zvaunopa.
Zvishandiso zvekutevera zvinogona kubatsira kusunungura ako ekutengesa uye ekushambadzira zvikwata kuti zviuye nezvimwe zvemukati nemishandirapamwe uye tarisa pane chaiwo ekutengesa matanho ayo vese vangangoita uye varipo vatengi vachapindura uye nekuwedzera kuwedzera kutengesa kwako.
Automation Iyo Inogona Kukura Bhizinesi Rako uye Kuwedzera Online Kosi Kutengesa
Yako email rondedzero ndeimwe yezvinhu zvakakosha uye zvine simba zvinhu zvaunazvo zvekushambadzira yako online kosi, kuvhara kutengesa, uye kukura rako bhizinesi. Gadzira email yako list nekugadzira inotungamira magineti iyo ichawana vangangove vatengi kukupa yavo email kero.
Nekuvapa kukosha chaiko mune zvako zvemukati zvemukati zvichaita kuti ivo vawane mukana wekukupa iwe neemail yavo ruzivo kuti uvape ivo kunyange zvakawandisa zvezvaunopa iwe uye uvatungamire ivo kuburikidza neyekutengesa fanera uye kune yakakwira kutendeuka chiyero na:
Kubudirira nyaya dzevamwe vakatenga kosi yako uye mhedzisiro yavakagamuchira kuburikidza nekuitora.
Kunyatso kujekesa mhedzisiro yedzidzo iyo yaunogona kutenga mutengi angatarisira pavanotora kosi yako yepamhepo.
Mitengo yakakosha, zviitiko, kana zvimwe zvinopihwa izvo zvinogona kuwedzera kuvakurudzira kuita sarudzo yekutenga.
Nezve Tevedzera Up Fred
Tevedza Up Fred ndeye chrome yekuwedzera iyo inozoomesa kutumira yekuyeuchidza email kune mumwe munhu asingakupindure kwauri. Zvese iwe zvunofanirwa kuita kuibatidza uye rega Tevedzera Up Fred akuitire basa rakaomarara iwe uye kana mumwe munhu akatevera zvino iwe unopindura uye unhanho imwe padhuze nekutengesa.
Saina Kuti Utevera Fred Mahara
Tags: email marketing automationteveratevera up fredfollowupfredemail yekutengesa
Micheal Habiger munyori ane ruzivo zvemukati uye mushambadzi ane makore matanhatu ezviitiko. Parizvino nyanzvi yepamusoro yekutengesa ku TeveraUpFred.